RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday saddexda goolhaye ee ku tartami doona abaal-marinta goolhayaha sanadka ee The Best – Gool FM
RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday saddexda goolhaye ee ku tartami doona abaal-marinta goolhayaha sanadka ee The Best
Haaruun September 2, 2019
(Yurub) 02 Sebt 2019. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa shaaciyey saddexda xiddig ee kama dambeysta ah oo ku tartami doona abaal-marinta goolhayaha sanadka ee The Best.
Abaalmarinta goolhayaha sanadka waxaa isagu soo haray labo goolhaye oo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyo hal goolhaye oo ka dheela horyaalka Spain ee La Liga.
Saddex goolhaye ee isugu soo haray abaal-marinta goolhayaha sanadka ee The Best ayaa waxa ay kala yihiin shabaq ilaaliyaha Liverpool ee Alisson Becker, goolhayaha kooxda Manchester City ee Ederson iyo goolwalaha kooxda Barcelona ee Marc-André ter Stegen.
Goolhaye Alisson Becker ayaa kooxdiisa Liverpool ku hoggaamiyey shanashada Champions League, shabaq-ilaaliye Ederson ayaa kooxdiisa Man City kula guuleystay horyaalka xilli ciyaareedkii hore, halka Marc-André ter Stegen uu Barcelona la hantay horyaalka La Ligaha Spain kal ciyaareedkii hore.
Goolhayaha ku guuleysta abaal-marintan ayaa lagu shaacin doonaa xafladda abaal-marinta FIFA lagu bixin doono oo lagu qabanayo magaalada Milano ee dalka Talyaaniga 23-ka bishan September.
RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday saddexda ciyaaryahan ee ku tartami doona abaal-marinta xiddiga sanadka ee The Best
RASMI: Lionel Messi oo ka mid ah saddexda xiddig ee ku tartami doona abaal-marinta goolka sanadka Puskas Award ee FIFA The Best